Yangu iPhone yakanamatira mumusoro wefoni. Heino mhinduro! - Zvimwe
iphone 4s yakanamatira simba bhatani
apple music app isiri kushanda
chitoro changu chekushandisa hachivhurike
iphone 6 plus kubata sikirini isingashande dzimwe nguva
iphone bluetooth haina kuwana zvishandiso
Yangu iPhone yakanamatira mumusoro wefoni. Heino mhinduro yekupedzisira!
Vari chokwadi kuti mahedhifoni haana kubatana kune yako iPhone, nekuti, hazvo… ivo havana. Iwe unoona iyo 'mahedhifoni' pamusoro peslider vhoriyamu kana iwe ukadzvanya mabhatani evhoriyamu uye yako iPhone haina ruzha. Wakatoyedza kugadzirisa dambudziko nekuomesa patsva iPhone yako, watobaya mahedhifoni uye wozviburitsa zvekare, asi hapana izvo zvakashanda. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone yakanamatira mumusoro wefoni , a Anoshamisa Anonyengera Kuti Atore Marara Kubva Muhedhifoni Jack Kana Mheni Port , Y maitiro ekugadzirisa dambudziko zvachose.
Yangu iPhone haina headphone chiteshi (Jack)! Iwe unogona sei kunamatira mune headphone mode?
Apple yakamira kushandisa chiteshi chefoni (Jack) pavakaburitsa iyo iPhone 7. Yaive ine nharo panguva iyoyo, asi vanhu vazhinji vakasarudza kushandisa mahedhifoni eBluetooth seAirPods.
Nekudaro, Apple haina kubvisa zvachose kugona kushandisa wired mahedhifoni pane nyowani iPhones. Paunotenga iyo iPhone 7 kana nyowani, iro bhokisi rinosanganisira maviri enewishuwa mahedhifoni anovhara akananga mune yako iPhone's Mheni chiteshi (inozivikanwa zvakare sechaji yekuchaja).
Iyo itsva iPhone 7, 8 kana X inosanganisirawo adapta iyo inobvumidza iwe kuti ubatanidze ako ekare mahedhifoni kune Mheni chiteshi pane yako iPhone. Zvisinei, Apple yakamira kusanganisira iyi adapta ne iPhone XS, XS Max, uye XR.
Kunyangwe hazvo iyo iPhone 7 uye matsva mamodheru asina echinyakare kahedhifoni jack, ivo vanogona vachiri kunamatira mune headphone modhi! Aya anotevera matanho achakubatsira iwe kugadzirisa chero iPhone modhi iyo yakanamatira mune headphone mode.
Kwete, iPhone, ¡ Hapana mahedhifoni akaiswa mukati!
Yako iPhone yakanamatira mumusoro wefoni nekuti iwe unofunga kuti mahedhifoni akaiswa mune yehedhifoni chiteshi kana iyo Mheni chiteshi, kunyangwe zvisiri. Izvi zvinowanzo kukonzerwa nedambudziko nehedhifoni chiteshi kana Mheni chiteshi. 99% yenguva yacho iri dambudziko rehardware, kwete dambudziko re software.
ku & t marongero ekutakura anovandudza 2020
Bvisa mukana wechinetso che software
Nzira iri nyore kwazvo yekuona kuti dambudziko re software harisi kukonzera kuti iPhone yako ibatirire muhedhifoni mode iri idzime uye irambe zvakare. Kudzima yako iPhone, tinya ubatise bhatani remagetsi (rinozivikanwa seyeti yekurara / yekumutsa) uye tsvedza bhatani riri padyo nemutsara unoti 'slide kumagetsi kudzima' pachiratidziri.
Kana iwe uine iPhone X kana nyowani, tinya uye ubatise bhatani repadivi uye bhatani rebhatani kudzamara 'slide yekudzima simba' ichioneka pachiratidziri. Swipe iyo icon icon kubva kuruboshwe kurudyi kudzima yako iPhone X kana nyowani iPhone.
Zvinotora masekondi angangoita makumi maviri kuti yako iPhone idzime, uye izvo zvakajairika. Kudzoreredza yako iPhone, dzvanya ubatise bhatani remagetsi (iPhone 8 uye kumberi) kana bhatani repadivi (iPhone X uye gare gare) kusvikira logo yeApple yaonekwa pachiratidziri. Unogona kusunungura bhatani remagetsi kana bhatani repadivi kana logo yeApple yaonekwa.
Kana yako iPhone ichiri yakanamatira mumusoro wefoni mushure mekunge yako iPhone yadzoswazve, zvinoreva kuti dambudziko rako re iPhone idambudziko rehardware. Kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti dambudziko iri riri kukonzerwa ne chimwe chezviitiko zviviri izvi :
chando chigamba chinopisa panguva yepamuviri
Marara akabatwa mukati memusoro wehefoni kana chiteshi cheMheni iri kunyengedza yako iPhone kufunga kuti mahedhifoni akaiswa mukati.
Iyo headphone chiteshi kana Mheni chiteshi chakakuvadzwa, kungave panyama kana nemvura.
Ngatitarisei mukati me iPhone yako
Tora tochi uye inopenya mukati meiyo headphone chiteshi kana Mheni chiteshi che iPhone yako. Pane guruva kana marara akavharirwa mukati? Ini pachangu ndawana zvese kubva mupunga, kusvika ku brown brown kuomerera, kune akatsemuka anodhura nzeve dzinonamira mukati. Kuedza kubvisa chimwe chinhu kubva kune yako iPhone's headphone port kana Lightning port kwakanyanya kuomarara, uye vamwe Apple mahunyanzvi haatombozama.
Kusvinura kuburikidza nephonephone yako jack kana Lightning port kunogona kukonzera kukuvara, asi vazhinji vevanhu vandakashanda navo vakabvuma kuti zvaive zvakafanira njodzi nekuti ivo havana chavakarasa. Dai ndaifanira kufungidzira ndaiti ndakabudirira ingangoita makumi mashanu muzana yenguva apo ini pandakaedza kuburitsa chimwe chinhu kubva mutengi redhiyo jack kana ndichishanda muchitoro cheApple.
Ini ndinowana sei junk kunze kweangu iPhone's headphone jack?
Iko hakuna imwe nzira chaiyo yekuita izvi, uye zvitoro zveApple hazvina maturusi akagadzirirwa kubvisa marara kubva mumusoro wejackoni. Pane Nekudaro, kune mamwe maitiro asina kukodzera anoshandiswa neApple mahunyanzvi kuti ivhu ribude. Chenjera: hapana imwe yeidzi nzira dzakabvumidzwa neApple nekuti vanogona kukonzera kukanganisa, asi ndakabudirira nemumwe wavo mumamiriro akasiyana.
Peni yeBIC inonyengera
Ini ndaida chaizvo kunyora chinyorwa ichi kuti ndikwanise kugovana zano iri newe. Iyo huru Apple tech yakandiratidza maitirwo azvo, uye ini ndichiri kufunga kuti yakajeka. Chenjera: chinyoreso chako haazorarame kune iyi maitiro. Heano maitiro ekushandisa BIC peni kubvisa marara kubva ku iPhone's headphone jack:
Shandisa mapapiro kutsemura muromo wepeni kubva mudzimba dzeplastiki.
Mhedzisiro yekumusoro kweiyo cartridge yakakura zvakakwana kubvisa marara kubva kuhedhifoni jack.
Pinza iwo magumo muhephonephone jack uye umonyorore zvinyoro nyoro kuti usunungure marara, wobva waidhonza kunze kwe iPhone yako kana iPad.
Ini ndakachengeta yakawanda yemakutu emhare jack neiyi yekunyepedzera. . Ngwarira kuti usapinze zvakanyanya. Kana marara akasabuda, enda kune inotevera tip
Edza kushandisa gaba remhepo yakamanikidzwa kufuridza mweya yakananga muhephonephone jack yako. Izvi zvinogona kushanda kunyangwe iwe usingaone chero chinhu chakabatwa mukati. Mhepo yakamanikidzwa inogona kusunungura marara anokwana kuzunza kana kudzinga zvachose. Iva munyoro: usaunze iyo can yemhepo yakamanikidzwa nzira yese kune yako iPhone's headphone jack uye wotanga kufuridza. Tanga kubva kunze kwe iPhone yako uye shanda nzira yako mukati.
Kana iwe usina gaba remhepo yakamanikidzwa, unogona Edza kuzvirova wega, asi ini handifarire iyo sarudzo kunyanya sezvo mweya wedu uine hunyoro hunogona kukuvadza matunhu emukati eiyo iPhone yako. Kana iwe uchinzwa kunge usina chaucharasikirwa, saka nezvose zviyedze.
Izvo zvinotapira akaonda zvakanyanya dzimwe nguva vanogona kukwira zvakadzika zvakakwana kuti vatore chimedu chemupunga kana zvimwe marara kubva mu iPhone's headphone jack. Zvisinei, kushandisa zvihwitsi zvine njodzi.Zvakafanana chaizvo nemutambo unonzi Trading (naMilton Bradley). Zviri nyore kwazvo kukuvadza mativi ehephonephone jack kana iwe ukasundidzira ivo vadzvanyiriri kure zvakanyanya.
Ini handikurudzire izvi, asi ...
Vamwe tech-savvy vanhu (uye muchivande mamwe maApple techs) vakabudirira kutora junk kubva ku iPhone's headphone jacks nekutora iyo iPhone parutivi uye kubvisa marara kubva pasi peiyo headphone jack. Heano mamwe acho yakanakisa iPhones teardown guides kana iwe uchida kuyedza, asi Ini handikurudzire kuti udaro.
Ini ndinowana sei marara mune iyo Mheni chiteshi che iPhone yangu?
Kufanana neyemusoro jack, zvinogona kuve zvakaoma kubvisa tsvina kubva kune Mheni chiteshi. Nzira yakachengeteka yekubvisa marara kubva kune Mheni chiteshi kushandisa antistatic brashi.
Kana iwe ukaedza kuchenesa chiteshi cheMheni nechinhu chakadai pepa clip kana chigunwe, unogona kuzviisa panjodzi yekukonzera kubhadharisa magetsi kune yako iPhone, izvo zvinogona kukonzera kutonyanya kukuvara. Toothpick zvakare ine njodzi, sezvo ivo vachigona chip uye kunamatira mukati me iPhone yako.
Nekudaro, vanhu vazhinji havana yavo antistatic brashi, uye izvo zvinoshanda nemazvo. Chitsva, chisina kushandiswa bhurosi remazino chinotsiva chakanaka kana usina antistatic bhurasho remazino.
Iyo yekudyara mashanga mashopu
Iyi nzira inogona zvakare kunzi 'kofi inomutsa' hunyengeri, sezvo chero mudziyo ungashandiswa. Flatten the tip of your cocktail straw or coffee stirrer kuitira kuti igone kukwana mukati meiyo iPhone's Mheni chiteshi. Shandisa chidimbu chakapetana cheuswa kuti ubvise kana kubvisa chero gunk kubva pachiteshi cheMheni.
Yakadzvanywa mweya uye tweezers zvakare inogona mhinduro kana paine chimwe chinhu chakavharirwa mune Mheni chiteshi che iPhone yako.
Ndakaedza zvese uye yangu iPhone ichiri yakanamatira mumusoro wefoni!
Kana yako iPhone zvakadaro kusashanda Mushure mekunge maedza zvese zviri pamusoro, pane mukana wakanaka kuti yako iPhone inoda kugadziriswa. Kazhinji, yephonephone jack jack kana Mheni chiteshi inomira kushandira chimwe chezvikonzero zviviri:
Chikonzero chakajairika nei maPhones akanamira mumusoro wephonefoni kukuvara kwemvura, uye kazhinji vanhu havazive kuti zvaigona kunge zvakaitika sei. Izvi ndizvo zvaizoita hurukuro iyi: Ini ndaibvunza, 'Iwe uri mutambi here?' Uye ivo vangati hongu. Ini ndaibvunza kuti: 'Unoteerera mimhanzi here paunomhanya kana kurovedza muviri?' Uye vakapindura hongu. Unogona here kufungidzira zvakaitika?
Nguva zhinji dambudziko iri rinoitika kana ziya rinodonha mumhanyi tambo yefoni . Pane imwe nguva, chidiki cheziya rinopinda mumusoro wejack kana chiteshi cheMheni uye chinokonzeresa yako iPhone kubatirira mumusoro wefoni.
Dzimwe mhando dzemamiriro ezvinhu emvura dzinogona kukonzera dambudziko iri zvakare: hapana mvura yakawanda inodiwa. Headphone jack pane akura maPhones uye chiteshi cheMwenje pane nyowani iPhones ndiwo maviri ekuvhurika kwekunze kweiyo iPhone, uye izvo zvinoita kuti zvinyanye kubatwa nekukuvara kwemvura. Kunyangwe iyo yese iPhone ichishanda zvakakwana mushure mekunge yanyorova, iyo headphone jack kana Mheni chiteshi inogona kusashanda.
sei kutora iphone mune dfu modhi
Kana yako iPhone ikabvaruka kuita zvidimbu chiuru, iwe unogona kunge uchiziva izvo zvisiri izvo. Kana iwe uchiri muchidimbu chimwe, pane chimwe chikonzero chakajairika nei maPhones akanamira mumusoro wefoni: Iyo headphone jack kana Mheni chiteshi chakaparadzaniswa neyako iPhone mamaboard / base.
'Mira kwechipiri.' Ini ndinochengeta yangu iPhone kuitira kuti ive iri chimiro chakanakisa '
Unganidza uye bvisa mahedhifoni kubva ku iPhone yako kwete inofanirwa kukonzera dambudziko iri. Handisati ndamboona dambudziko iri richiitika kubva mukushandisa chaiko. Heuno mubvunzo wandingabvunze: 'Unoputira mahedhifoni kutenderedza yako iPhone paunenge usingaishandisa?' Mutengi angati hongu. (Huya ufunge nezvazvo, iye uya tekinoroji akandidzidzisa BIC peni yekunyepedzera akandiudzawo izvi. Ini ndaizomupa chikwereti kana iye asina kufunga kuti angangopinda munyatwa.) Unogona here kufungidzira zvakaitika pano?
Mushure mechinguva, kushushikana kwemahedhifoni kwakamonerwa pa iPhone kumagumo kwakabatana nehephonephone jack kana Mheni chiteshi kunowedzera zvekuti vanotanga kufambisa kure kure neyaamai bhodhi / mamaboard. Zvakanaka kuputira mahedhifoni kutenderedza yako iPhone, sekureba sekunge iwe uchiabvisa paunoita.
Nehurombo, kana iwe uri kuverenga izvi, pane mukana wakanaka wekuti kukuvara kwatoitwa uye iwe unofanirwa kugadzirisa yako iPhone.
Dambudziko iri rinonyanya kushungurudza vanhu vanoenda kuchitoro cheApple nekuti iyo chete Kugadzirisa sarudzo iyo Apple inopa kugadzirisa yakaputsika headphone jack iri chinja iyo iPhone yese. Vanhu vazhinji vanongoramba, vachisarudza kushandisa headset yeBluetooth kana diki yekutaura kuti vagamuchire uye vagamuchire nhare, asi zvinonetsa kukuru kana ruzha rusiri kushanda pa iPhone yako.
iphone haigoni kuwiriraniswa
Iyo kesi yakafanana neiyo iPhone Mheni yakaputsika madoko. Apple inowanzo kutsiva yako iPhone kana yako Mheni chiteshi yaputswa. Kutsiva kwakafukidzwa neako AppleCare + garandi.
Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, marara akavharirwa mukati memusoro we iPhone yako kana chiteshi cheMheni haina kuvharwa pasi pewarandi, saka kugadzirisa dambudziko iri kuri nyore chaizvo zvinodhura.
Kana iwe uchida kugadzirisa yako iPhone nhasi ne zvishoma zvishoma mari iyo Apple inokukumbira iwe, Pulse ichaendeswa kumba kwako kana nzvimbo yaunosarudza mune isingasviki awa, uye ivo vanopa garandi yeupenyu pazvikamu uye nebasa.
Tora nharembozha nyowani
Ungangoda kufunga nezvekuwana foni nyowani pane kugadzirisa yako yazvino foni. Kugadziriswa kwe iphone kunogona kudhura. Kana zvinopfuura chinhu chimwe chakakuvadzwa (zvinova zvisingawanzoitika kana ukadonhedza iPhone yako kana kuiburitsa mumvura) iyo kambani yekugadzirisa inowanzo fanirwa kutsiva chikamu chimwe nechimwe, kwete chete chephonephone jack. Tarisa kwaari UpPhone nhare yekuenzanisa nhare kuongorora zvaunogona kuita!
Zvinoshungurudza kana iyo iPhone ikabatika mumusoro wefoni, nekuti zvinoita kunge dambudziko riri nyore rinofanirwa kuve nemhinduro yakapusa. Zvinosuruvarisa kuti chidimbu chidiki chemarara kana donhwe diki remvura rinogona kukanganisa zvakadaro pa iPhone yako. Ini ndinotarisira nemoyo wese kuti yako iPhone haisati yakanamirwa mumusoro wefoni zvakare, asi kana zvirizvo, zvirinani iwe unoziva zvekuita zvinotevera. Inzwa wakasununguka kusiya chirevo pazasi. Ndinoda kuziva nezvenzira dzese dzekugadzira dzawakauya nadzo kuti ubvise marara kubva kuhedhifoni jack kana Mheni chiteshi pane yako iPhone.